Hindiya oo Xaqiijisay Muwaadin Soomaaliyeed oo ku dhex Geeriyooday Xabsi ku yaala Dalkeeda? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Hindiya oo Xaqiijisay Muwaadin Soomaaliyeed oo ku dhex Geeriyooday Xabsi ku yaala...
Muwaadin Soomaaliyeed oo ku xirnaa gudaha Dalka Hindiya loona heystay fal danbiyeed la xariiro Burcadbadeednimo ayaa ku Geeriyooday Dalkaasi Hindiya, isagoo qeyb ka ahaa tiro Maxaabiis ah oo la xukumay.
Muwaadinka ayaa lagu magacaabi jiray Catoor Bashiir Barre, oo da’diisu ay ahayd 28 jir ayaa 11 bishaan August qeyb ka ahaa 27 xubnood oo Soomaali ah, kuwaasi oo Maxkamad la saaray, ay ku xukuntay xabsiyo kala duwan.
Marxuum Catoor Bashiir ayaa lagu xukumay xabsi daa’in, kadib markii lagu helay in uu qeyb ka ahaa Afduub loo geystay Markab marayay Biyaha Soomaaliya, waxa uuna ku xirnaa xabsi lagu magacaabo Talooja oo ay ku xiran yihiin Muwaadiniin badan oo Soomaali ah.
Vishwajeet oo ah qareenka u doodayay Cator Bashiir ayaa xaqiijiyay in uu ku Geeriyooday isbitaal lagu magacaabo jj Hospital 15kii bishan August.
Dalka Hindiya ayaa waxaa ku xiran Muwaadiniin fara badan oo soomaali ah, kuwaasi oo loo heysto falal la xariira Burcadbadeednimo, waxaana jiro kuwa la xukumay oo dhawaan loo soo wareejin doono Soomaaliya, si ay xabsigooda ugu dhamaystaan.